एक मुस्कुराउने र कडा सम्बन्ध संग डिल गर्न6तरिकाहरू - सम्बन्ध
एक मुस्कुराउने र कडा सम्बन्ध संग डिल गर्न6तरिकाहरू
यो गाह्रो हुन्छ जब तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई पर्याप्त ठाउँ दिंदैन।
यो कुनै पनि कारणको लागि हुन सक्छ, र बिभिन्न तरिकाहरूमा प्रकट गर्न सक्दछ।
जे होस्, यसले प्रस्तुत गर्दछ, यो यस्तो चीज हो जुन तपाईंले नेभिगेट गर्नुपर्नेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ तपाईंको सम्बन्ध टिकाऊ र स्वस्थ रहनको लागि।
र यो सजिलो सवारी हुनेछैन।
कुनै पनि परिस्थितिमा दिक्क लाग्ने महसुस गर्न हाम्रो प्राकृतिक प्रतिक्रिया भनेको आफैलाई हटाउनु हो, वा त्यो अवस्थालाई कुचल्नबाट रोक्नु हो।
यो राम्रोसँग कार्य गर्दछ यदि हामी डुव्टको मुनि पक्रिएका छौं वा कपाटमै फसेका छौं, तर यो एकदम फरक हुन्छ जब हामी अर्को व्यक्ति र उनीहरूको मानसिक तथा भावनात्मक अवस्थासँग व्यवहार गरिरहेका हुन्छौं।
भाग्यवस, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो गाह्रो अवस्थाको लागि।
१. स्पष्ट सीमाहरू स्थापना गर्नुहोस्।
यो अभिव्यक्त गर्न मेरो एक क्षेत्र छ कि तपाईंले अर्को व्यक्तिलाई दिक्क लाग्नु भएको छ उनीहरूको क्लिनियर बिना नै।
तपाईं केवल एक शौकको अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईंले साँच्चै रमाइलो गर्नुभयो। तर यदि तपाईं उनीहरूलाई 'एक्लो समय' चाहिन्छ भनेर बताउन कोशिस गर्नुभयो भने उनीहरू त्रसित हुनेछन्।
त्यो वाक्यांशले केही व्यक्तिहरूमा गहन असुरक्षालाई प्रेरणा दिन्छ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने ठाँउ बुझ्नुका साथै तपाईलाई प्रदान गर्नुको सट्टा, तिनीहरू तपाईसँग समय बिताउने बारेमा अधिक प्रगाढ हुनेछन्, किनकि तिनीहरूको सम्बन्ध गुमाउनुपर्दा उनीहरू डराउँछन्।
कुञ्जीले यो स्पष्ट पार्दछ कि तपाईंलाई एक्स्ट समयको मात्र समय चाहिन्छ। यो एक धेरै विशिष्ट रकम बनाउनुहोस् ताकि तिनीहरूसँग एक स्पष्ट अपेक्षा छ कि तपाईंले एक अर्कालाई फेरि कहिले देख्नुहुनेछ।
तपाईं व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग दुई साताको रात बिताउनुहुन्छ र यो तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ। वा त्यो तपाईंलाई पढ्नको लागि आफैंमा समय चाहिन्छ, वा व्यायाम गर्नुहोस्, वा अन्यथा तपाईंको आफ्नै काम गर्नुहोस्।
यदि उनीहरूले सुझाव दिए कि तिनी तपाईं र तपाईंको साथीहरूसँग ट्याग छन्, वा तपाईंसँग काम गर्दछन्, वा “केवल ह्या hang्गआउट” हुन्छन् जब तपाईं आफ्नै काम गर्नुहुन्छ, दृढ रहनुहोस्। यो तपाइँको समय हो, र तपाइँको ठाउँ।
तिनीहरूले बहस गर्न वा संकेत दिन सक्छ कि यदि तपाईं तिनीहरूसँग हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईंले श something्कास्पद केहि बनाउनु पर्छ। यो कलीमा निप गर्नुहोस्, र उनीहरूलाई ओभरटेप गर्न नदिनुहोस्।
यदि तिनीहरू दृढ छन् भने, फिर्ता लिनुहोस् र यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट गर्नुहोस् कि तिनीहरूको व्यवहार अस्वीकार्य छ। यो कडा प्रेम जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो आचार आवश्यक छ भने यो व्यवहार कहिल्यै परिवर्तन गर्न भने।
२. उनीहरूको असुरक्षा प्रति अनुकम्पा राख्नुहोस्, तर उनीहरूमा नडराउनुहोस्।
यदि तपाईं यस सम्बन्धलाई जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो पार्टनरको अनावश्यक व्यवहारलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
यसको मतलब बुझी तिनीहरू कहाँबाट आउँदैछन्। विभिन्न प्रकारका आघात र जीवन परिवर्तन अनुभवहरूले हामी के गर्छौं र आवश्यक छैन, चाहँदैन, वा सराहना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
उदाहरण को लागी, एक व्यक्ति जो हुर्किएको महसुस र आफ्नो आमा बुबा द्वारा अनावश्यक महसुस आफ्नो साथी संग निरन्तर स्नेह र समय को आवश्यकता हुन सक्छ। अन्यथा, तिनीहरू असुरक्षित र माया पाएको महसुस गर्छन्। तिनीहरू स्थिर हुनसक्छ कुनै पनि सम्भावित चिन्हको लागि कि ती फालिनेछ।
यी व्यक्तिहरू अलिकति उत्तेजित हुँदा आत्मिक सर्पिलमा पर्न सक्छन्, र आफ्नो पञ्जालाई अझै गहिरोमा खन्नुहोस्, आश्वासन र 'सुरक्षित' महसुस गर्न प्रेमको माग गर्दै।
यदि यो अवस्था हो जसको साथ तपाईं संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तब तपाईंलाई कस्तो लाग्छ उनीहरूले प्रतिक्रिया दिनेछन् यदि उनीहरूलाई अभाव छ भनेर बताउनुहुन्छ भने? सायद तपाईमा अझ बढी मागहरु सहित।
उर्जा जुन उनीहरूको आफ्नै आत्म-प्रेम र उद्देश्यमा जानुपर्दछ बाह्यीकृत भइरहेको छ। सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि यदि तपाईंले यसलाई स्पष्ट तरीकाले औंल्याउनुभयो भने, यसले अवस्थालाई अझ बढाउने सम्भावना छ।
अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण लिन उत्तम हुन्छ। तिनीहरूको ध्यान पुन: निर्देशित गर्नुहोस् जुन तिनीहरू का बारे भावुक छन्। तिनीहरूको लक्ष्य, सपना, आदि।
उनीहरुलाई उत्साहपूर्वक प्रोत्साहन दिनुहोस्। यदि उनीहरू तपाईंको बारेमा पागल छन् भने, यो एक शक्तिशाली प्रेरणादायक उपकरण हुनेछ, र ध्यान असंतुलन बिस्तारै सर्नेछ। तिनीहरू आफैंमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भन्दा स्वस्थ रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुरू गर्दछन्।
कार्यहरूले शब्दहरू भन्दा ठुलो आवाज निकाल्छ र कम समय लिन्छ। तपाईंको महत्वपूर्ण अन्यसँग रमाईलो वा खेलका गतिविधिहरूका लागि समय बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, र नतिजाले तपाईंलाई दुखित तुल्याउन सक्छ।
हुनसक्छ तपाईले सँगै बिताउनु भएको सबै समय तपाईको पार्टनरले 'क्वालिटी टाइम' ठान्दैनन्। हुनसक्छ तपाईं सँगै ठाउँमा जान, नाटकहरू, खानेको लागि, विभिन्न संस्कृतिहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गर्नुभयो। तर अब तपाई प्रायः घरमा बस्नुहुन्छ र टिभी हेर्नुहुन्छ।
जहाँसम्म यो धेरै सामान्य हुन्छ किनकि धेरै जसो सम्बन्धहरू दैनिक जीवनमा बसोबास गर्दछन्, तपाईंको साथीले तपाईंलाई बढी समय दिनको लागि धकेल्दैछ किनकि तपाईं सँगै बिताउने समयको जस्तो जादू एक पटक छैन।
तपाइँको सम्बन्धमा वास्तविक जोडीहरुलाई पुनःप्रसार गरेर, तपाइँ तपाइँलाई आफुलाई पनि अधिक समय दिनको लागि उनीहरूलाई अधिक इच्छुक फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
Ask. सोध्नुहोस् कि केको साथ सुरू गर्न तपाईं सँगै आकर्षित गर्नुभयो?
यो वस्तुगत र इमान्दारीपूर्वक याद दिलाउन राम्रो हुन सक्दछ जुन तपाईंलाई यस व्यक्तिमा सुरुमा आकर्षित गर्‍यो।
के यो उनीहरूको देखिन्थ्यो? तिनीहरूको दिमाग? तिनीहरूको हास्यको भावना?
यो तपाईंको पार्टनरको बारेमा के हो जसले तपाईंलाई उनीहरूको प्रेममा फस्न लगायो, वा साझेदारीको लागि पर्याप्त मोहित बनायो?
एकचोटि तपाईंले यो क्रमबद्ध गरिसक्नु भएपछि निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको गतिशीलमा केही परिवर्तन भएको छ वा छैन। के तपाइँ सम्बन्धमा केहि वा कसैले परिवर्तन भएको महसुस गर्नुहुन्छ? कुन मास्क वा ढालहरू गिरे?
यदि तपाईं दिक्क महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, आफैलाई सोध्नुहोस् कि यो यो हो किन कि तिनीहरू आवश्यक र क्लिनिierर भइरहेका छन् वा यदि तपाईं उनीहरूसँग सुरु हुनको लागि आफूले चाहेको प्रकारको ध्यान चाहनुहुन्छ भने।
कसरी काम मा केटाले तपाइँलाई मनपर्छ भने
यसबाहेक, ध्यान दिनुहोस् तपाइँको व्यवहार परिवर्तन भएको छ। यदि तपाईं अरूसँग फ्लर्ट गर्दै हुनुहुन्छ वा सामाजिक मिडियामा उत्तेजक फोटोहरू पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंको पार्टनरको असुरक्षा र न्यूरोसिसमा ठूलो योगदान दिने कारक हुनेछ।
यो एउटा संकेत पनि हो कि तपाईले अब यो साझेदारीमा लगानी गर्नुभएन, किन त्यसैले तपाईं दिक्क महसुस गर्नुहुन्छ।
तपाईं के महसुस गरिरहनु भएको छ विचार गर्नुहोस्?
सबै दुबै तरिकाहरू नोट गर्नुहोस् जुन तपाईं दु: खी हुनुहुन्छ। के यो शाब्दिक मुस्कुराउने हो? के तिनीहरू हर समय तपाईंलाई शारीरिक रूपमा टाँसिरहन्छन्? वा ती उनीहरूको भावनात्मक मागहरु संग तपाइँ अभिभूत छ?
अर्को व्यक्तिको बारेमा तपाइँको भावनालाई यथार्थरूपमा भन्ने तरिकाको एक तरीकाले तपाइँको शरीरलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाइँको शरीरले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र नोट गर्दछ जब तपाईं अन्य व्यक्तिको कम्पनीमा हुन्छ नोट लिनुहोस्।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक घनिष्ठ मित्र संग समय खर्च गर्नुभयो भने, तपाईंको आसन आराम हुन सक्छ। तपाई खुल्लमखुल्ला भोकाएको वा तिर्खाएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, र सामान्यतया सहज महसुस गर्नुहुनेछ।
यसको विपरित, यदि तपाईं एक व्यक्ति द्वारा दु: खी महसुस गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं पाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईं समयको करिब 90% समयको लागि ब्रेस्ड हुनुहुन्छ। तपाईंको फोन बीप सुन्नुको लागि तपाईंको प्रतिक्रिया फ्लीन्च र सास हुन सक्छ। तपाईको दाँत क्लन्च गर्न वा तपाईंको ब्राउउलाई उखेल्ने बाट तपाईलाई टाउको दुख्न सक्छ।
थप रूपमा, तपाईं आफ्नो भोक हराउन सक्नुहुनेछ, वा तिनीहरूको कम्पनीमा पाचन समस्याहरू हुन सक्छन्।
यदि तपाईं आफ्नो फोनमा 'मिति रात' खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, वा किन तपाईं एकजुट हुन सक्नुहुन्न भन्ने बहानामा आउदै हुनुहुन्छ भने, यो ठूलो मुद्दा हो।
दुबै जीवन अनुभव र व्यक्तिहरू खानासँग तुलना गर्न सकिन्छ, एक तरीकाले। तिनीहरूले हामीलाई विभिन्न प्रकारका पोषण प्रदान गर्दछन्, र हाम्रो शरीर र दिमागमा बिभिन्न प्रभावहरू छन्।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हामी दिईएको अनुभव पछाडि कस्तो महसुस हुन्छ, र त्यो हामीले व्यक्तिहरूसँग बिताउने समय समावेश गर्दछ।
यदि कसैले नराम्रो स्वाद छोड्दै जान्छ, वा गम्भीर पाचन समस्याहरू बोल्न भने, तब यो तपाईंको आहार परिवर्तन गर्ने समय हो।
यो तपाईं र दुबैको लागि राम्रो चीजहरू परिवर्तन गर्न खुला र इमान्दार कार्य हुन सक्छ। वा यो कडा स ind्केत हुन सक्छ कि यस सम्बन्धले यसको पाठ्यक्रम चलाएको छ, र तपाईं दुबै अन्य दिशाहरूमा जानु भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ।
चाहे तपाइँ दुबै चीजहरू काम गर्न छान्नुहुन्छ वा विभाजित हुनुहुन्छ, यो आपसी बृद्धि र उपचारका लागि उत्कृष्ट अवसर हो।
This. यस सम्बन्धको बारेमा तपाईंको भावनाहरूको बारेमा इमानदार हुनुहोस्।
यस व्यक्तिको बारेमा तपाईं ईमान्दारीसाथ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? तिनीहरूको सबै गुणहरू लेख्नुहोस् र ती प्रत्येक पक्षले कसरी तपाईंलाई महसुस गराउँछ।
उदाहरण को लागी, तपाइँ यस व्यक्ति को लागी आकर्षित गरीएको हुन सक्दछ केवल उनीहरू आकर्षक भएको मात्र होइन, तर तिनीहरू असुरक्षित स्थितिमा थिए र तपाइँ उनीहरूलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्थ्यो।
अब, केहि महिनाहरू (वा वर्षहरू) सडक तल, तिनीहरूले तपाईंलाई दृढतापूर्वक सेतो नाइट मोडमा राखेका हुन सक्छन्। त्यो अत्यन्तै निकासी हुन सक्छ, र जो एक व्यक्ति संग यौन घनिष्ठ हुन चाहन्छ जो हर समय बच्चा जन्माउन आवश्यक छ?
के तिनीहरूको जीवन कौशल र उपलब्धिहरू तपाईंको तुलना गर्न सकिन्छ? वा तपाईं यहाँ अधिक सक्षम, सफल पार्टनर हुनुहुन्छ?
धेरै जसो समय, जब व्यक्तिहरू आफ्ना पार्टनरलाई दिक्क लाग्छन्, तिनीहरूको व्यवहार जानबूझकर द्वेषको सट्टा निर्दोष छ। तिनीहरूले तपाईंलाई माया गर्छन्, तपाईंतिर हेर्छन्, तपाईंलाई सम्मान गर्छन् र तपाईंलाई प्रशंसा गर्छन्। तपाईं चीजहरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरूले सपना मात्र देख्छन् हुन सक्छ तपाईं बहादुर, वा चलाख हुनुहोला, वा सुन्दरता छ कि bewilders र मादक पदार्थ।
यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो लाग्न सक्छ कि उनीहरूले असुरक्षित र हीन महसुस गरे। यदि तपाइँको पार्टनरलाई लाग्छ कि तपाइँ उनीहरूको लिगबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू सायद यस्तो महसुस गर्छन् जस्तो कि उनीहरूले तपाईलाई प्रदान गरिरहेको स्तरमा तपाईलाई केहि पनि प्रदान गर्न सक्दैनन्।
नतिजाको रूपमा, उनीहरूसँग तपाईलाई गुमाउनु पर्ने तीव्र डर हुन सक्छ। विशेष गरी तपाईलाई कसैलाई गुमाउँदै। कोही जो चलाख, बलियो, राम्रो देखिन्छ, राम्रो काम, राम्रो स्वास्थ्य, आदि छ। 'राम्रो'।
जब कुनै व्यक्ति असुरक्षित महसुस गर्दछन्, उनीहरूले प्रायः उनीहरूलाई पराजित गर्न खोज्दछन् (जस्तै दिक्क लाग्ने, बिना प्रश्नहरू योजना बनाउने, प्रभुत्व स्थापित गर्न अन्तरिक्ष आक्रमण गर्ने), वा तिनीहरूसँग टाँसिएका हुन्छन् ताकि तिनीहरू आफ्नो स्थान गुमाउँदैनन्।
हुनसक्छ तपाईंको प्रेमी तनावको एक उन्मत्त बल हो, जो तपाईं कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने जाँच नगरीकन तपाईंमा अन्तहीन कुराकानी गर्दछ। वा, तपाइँ उनीहरूको जीवनमा मूल रूपमा फर्नीचर हुनुहुन्छ।
उनीहरूले तपाइँसँग कुरा गर्न वा तिनीहरूको मुद्दा सुन्न, उनीहरूको समस्याहरूको समाधान गर्न र उनीहरूको चाहनालाई तृष्णा गर्न आवश्यक छ, तर उनीहरूले विरलै नै भने भने तपाईको आवश्यकता के हो याद गर्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई मायाको साथ दिक्क पार्न सक्छ र तपाईंलाई खुसी पार्न यत्ति धेरै कोसिस गर्दछ कि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ।
यो तपाईको पार्टनरमा जति सक्दो कठिन छ, केहि दिनको लागि तिनीहरूबाट टाढा बस्नु वास्तवमै लाभदायक हुन सक्छ। तपाईं तिनीहरूसँग पाठको माध्यमबाट हल्कासँग स engage्लग्न हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यस भन्दा बढि केहि पनि हटाउन प्रयास गर्नुहोस्।
तिनीहरूलाई भन्नुहोस् तपाईलाई चीजहरू सोच्न र मूल्या assess्कन गर्न समय चाहिन्छ। सुरुमा उनीहरूमा के आकर्षित भयो र तपाईं यसबाट के चाहानुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यो केवल जब तपाईं बीचको बिट पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईं स्थितिको बारेमा स्पष्ट सोच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं साकार हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं वास्तवमा यो व्यक्तिलाई तपाईंको जीवनमा चाहानुहुन्छ र तपाईंको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि लिने कुरामा इच्छुक हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने, महान, यो स्पष्टताले तपाईंलाई आवश्यक कार्यहरू लिन मद्दत गर्दछ।
वा हुन सक्छ कि ती कुनै पनि खराब छैन तर तपाईं केवल बढ्न चाहनुहुन्छ। यदि यो केस हो भने, चीजहरू चाँडै अन्तमा लैजानुहोस् तिनीहरूलाई तान्नु भन्दा। यसले तपाईं दुबै कुनै पनि पक्ष अभिनय गर्न जारी राख्दैन यदि चीजहरू ठीक छन् यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि उनीहरू असफल हुन बर्बाद छन्।
Coun. परामर्श लिनुहोस्।
यदि तपाईं यस सम्बन्धमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग स्पष्ट रूपमा तपाईंको अगाडि केही चुनौतीहरू छन्।
यो तपाईं दुई लाई मात्र नेभिगेसन गर्न सकिन्छ जबकि, यो केहि सजिलो हुने छ यदि तपाईं केही पेशेवर मद्दत दर्ता गर्नुहुन्छ भने।
सर्वप्रथम, दम्पतीहरूले सल्लाह लिई दुबैलाई सुरक्षित वातावरणमा तपाईको विचार र भावनाहरू पोखाउन र यी विषयहरूमा प्रशिक्षण र अनुभव भएको कसैलाई सुन्न र सल्लाह प्रदान गर्न दुबैलाई अनुमति दिन्छ।
यो वातावरणले सच्चाइ बाहिर आउन सजिलो बनाउन र रणनीतिहरू राख्न को लागी दुबै दिन र लामो दुबै आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न को लागी।
सरल रूपमा जान्नुहोस् कि तपाईंले प्रत्येक दुई हप्तामा भेटघाटहरू पाउनु भएको छ यसले तपाईंलाई रणनीतिहरू अभ्यासमा राख्न र सम्बन्धलाई स्वस्थ बनाउँन तपाईंलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ।
हामी रिश्ता हीरो द्वारा प्रदान गरिएको अनलाइन सेवालाई सिफारिश गर्दछौं। तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा र / वा एक जोडीको रूपमा सल्लाह चाहिने सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका प्रशिक्षित विज्ञहरू एक पटकमा उपलब्ध छन् तपाईंको आफ्नै घरको आरामबाट तपाईंलाई उपयुक्त बनाउन। अहिले नै कसैसँग कुराकानी गर्न, वा पछाडि मितिमा सेसन व्यवस्था गर्न।
तपाईको साथीलाई एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य थेरापिस्ट हेर्नको लागि यो राम्रो विचार हुन सक्छ यदि उनीहरू तपाईसँग हुनु आवश्यक छ भने चरम तहमा पुगेको छ। उनीहरूसँग अनप्याक र समाधान गर्न केहि समस्याहरू छन्, र जस्तो तपाईलाई एक शारीरिक चोट लागेको छ एक विशेषज्ञ द्वारा भाग लिएको जस्तो, भावनात्मक आघातका लागि समान गर्न यो समझदार छ।
यदि तिनीहरू यो गर्न चाहन्छन् भने, तपाईं यो लिंक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एक थेरपिस्ट पत्ता लगाउन जुन स्थानीय वा अनलाइन परामर्शको लागि उपलब्ध छ।
मेरो कुनै साथी छैन
अन्तमा, सम्बन्धमा काम गर्ने वा तपाइँको अलग मार्गहरूमा जाने निर्णय तपाइँमा निर्भर छ। यदि चीजहरू अब स्वस्थ छैनन् र तपाईं दुबै व्यक्तिको रूपमा दुबै बाटो देख्नुहुन्न भने, तपाईं रहनको कुनै बाध्यता हुनुहुन्न, तपाईंको साथीले कत्तिको गाह्रो भए पनि निर्णय लिनुहोस्।
१२ सीमाहरू तपाईले सम्बन्धमा सेट गर्नु पर्छ
११ असुरक्षित मानिसका लक्षण (+ एउटाको साथ व्यवहार गर्ने सल्लाहहरू)
कसरी प्रेममा पतन ढिलो गर्न
जिंदर महल तब र अब
म किन मेरो प्रेमी संग ब्रेकअप गर्न जारी राख्छु?
तपाइँ माया नगर्ने कसैको साथमा मायामा कसरी पर्नु हुन्छ
कुनै साथीहरु संग मान्छे को लागी रमाईलो गतिविधिहरु